BURMA: [Big Brothers & Sisters] New doc: “Fundamental Forces”
[Big Brothers & Sisters] New doc: “Fundamental Forces”
BigBrother Myanmar created the doc: ""Fundamental Forces""
[By Myo Min Paing]
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာတွေမှာ ပညာရှင်တစ်ယောက်လို ဆရာကြီး လုပ်ပြီး မရေးချင်ပါဘူး။ ကိုယ်ကလဲ ဆရာကြီးမှမဟုတ်သေးတာ။ စာသံပေသံကြီးရေးရင် စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရတာလေးမယ်။ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေမဟုတ်ရင် ပျင်းဖို့ အရမ်းကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ facebook လောကကလဲ နိုင်ငံရေး၊ IT နဲ့ ရသရေးရာတွေ အများစုဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆို များများမတွေ့ရဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အပြင်က လူတစ်ယောက်ယောက် လာဖတ်ရင်လဲ အဆင်ပြေအောင် အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ်သိတာလေး နဲနဲပါးပါးကို စာအုပ်တွေနဲ့မှီငြမ်းပြီး တတိယရှုထောင့် ကနေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးရတာကို ၀ါသနာပါပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရသဆန်ဆန်နဲ့ ရူပဗေဒရဲ့ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ရာတွေကို အလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင် တင်ပြချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလဲ အခြေခံ ရူပဗေဒ အား တွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို အနည်းငယ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ တခြားရေးစရာ အိုင်ဒီယာလဲ ခေါင်းထဲက မထွက်တာမို့လို့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတစ်ချို့နဲ့ အမြင်တစ်ချို့ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အလွဲအမှားတွေရှိရင် ထောက်ပြပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကြ၀ဠာကြီးမှာ အားတွေ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်များ ရှိလိမ့်မယ်လို့ စာဖတ်သူ ယူဆပါသလဲ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ပေါ့။ မိဘနဲ့သားသမီး ချည်နှောင်ထားတဲ့အား၊ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး အချင်းချင်းဆွဲဆောင်တဲ့အား၊ ကောင်မလေး မျက်ဝန်းအကြည့်တစ်ချက်ရဲ့ … အဲ .. အဲဒါတွေတော့ ထည့်မတွက်ကြေးပေါ့ဗျာ။ သိပ္ပံရှုထောင့်ကပေါ့။ ဘယ်နှစ်မျိုးတောင် ရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ တစ်ချို့ ကျောင်းသားတွေကတော့ သဘာဝမှာ အားတွေ မျိုးစုံရှိတယ်လို့ ထင်ကြမှာပါပဲ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကြ၀ဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ (ခေတ်သစ်ရူပဗေဒအရ) အခြေခံအားက လေးမျိုးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလေးမျိုးအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ချင်လို့ အခုလို နိဒါန်းပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရူပဗေဒအခြခံ အားလေးမျိုးအကြောင်းကို စတင်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကပါ။ အဲဒီတုန်းက အပြင်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထဲမှာ (စာအုပ်နာမည်မမှတ်မိ) အဲဒီအားတွေအကြောင်းဖတ်မိပြီး အတော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။
နယူးကလီးယပ် အားပြင်း (Strong Interaction)
အီလက်ထရို မက္ကနက်တစ်အား (Electromagnetic Interaction)
နယူးကလီးယပ် အားပျော့ (Weak Interaction)
ဒြပ်ဆွဲအား (Gravitational Interaction)
(အခြေခံ အားလေးမျိုး သရုပ်ပြမြေပုံ)
နယူးကလီးယပ် အားပြင်းဆိုတာကတော့ အက်တမ်တွေရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ နယူးကလီးယပ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေသော အလွန်ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့ အားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အားလေးမျိုးထဲမှာတော့ အပြင်းဆုံးအားဖြစ်ပြီး အားစက်ကွင်း အတိုဆုံး အားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နယူကလီးယပ်အားပြင်းရဲ့ စက်ကွင်းဟာ အတိုဆုံးဖြစ်နေတာကို ကြံဖန်ပြီး ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဆွဲအားဟာ ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့အတွက် သူသာ တာဝေးအားဖြစ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး စိစိညက်ညက်ကြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေရော တွေးမိဖူးမလားမသိဘူး။ အက်တမ်တစ်လုံးရဲ့ နယူးကလီးယပ်ထဲမှာ ပရိုတွန်တွေနဲ့ နယူထရွန်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာလေ။ အဲဒီမှာ ပရိုတွန်ဆိုတာက အပေါင်းတန်ဖိုးဆောင်နေတာမို့လို့ နယူးကလီးယပ်ထဲမှာ အတူတကွနေထိုင်ကြရင် အချင်းချင်းတွန်းကန်ကြပြီး အက်တမ်ကြီး ပြိုကွဲသွားစရာဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီလို ပရိုတွန်အချင်းချင်း အဆက်မပြတ် တွန်းကန်ကြမယ့် အားတွေကို နယူးကလီးယပ်အားပြင်းက ဖုံးလွှမ်းသွားပြီး အားလုံးကို တစ်စုတစည်းထဲ ရှိနေစေတာဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကလီးယပ် အားရဲ့ စက်ကွင်းအကျယ်ဟာ ၁၀ ပါဝါ အနှုတ် ၁၅ မီတာဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။ တိုတိုလေးမှ တကယ့်ကို တိုတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအားဟာ နယူးကလီးယပ်အထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ်ပြီး အပြင်က အီလက်ထရွန်တွေဆီကို မသက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။ အားစက်ကွင်း တိုလွန်းတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟီနိုရှီးမားနဲ့ နာဂါဆာဂီ ပြာပုံဘ၀ ကျရောက်ရခြင်းရဲ့ အဓိက လက်သည်တရားခံဟာ အခုပြောခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယပ် အားပြင်းကြီး ဖြစ်ကြောင်းပါ။ အဲဒီအကြောင်း စိတ်ဝင်စားရင် နောက်တစ်ပိုစ့်ပေါ့ဗျာ။
အီလက်ထရို မက္ကနက်တစ်အားကတော့ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယပ်အားပြင်းရဲ့ အပုံတစ်ရာပုံ တစ်ပုံ ပြင်းအားရှိပါတယ်။ ကိုးတန်းကျောင်းသားတွေ သိရှိကြတဲ့ နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပြန်နိယာမအတိုင်း ဒီအားစက်ကွင်း တည်ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဓိက ဇတ်ဆောင်ကတော့ အီလက်ထရွန်တွေပါ။ သူတို့က အက်တမ်ကို ပတ်လမ်းတွေအတိုင်းပတ်နေရင်း ပြင်ပကနေ အားတစ်ခုခု သက်ရောက်စေရင် ဆွထားခြင်းခံရတဲ့ အခြေ (excited state) ကိုရောက်ပါတယ်။ အဲဒီကမှတဆင့် အီလက်ထရွန်တွေ ပတ်လမ်းပြောင်းသွားရင်တော့ ဖိုတွန်တွေ စုပ်ယူခြင်း ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒီလို အီလက်ထရွန်တွေ ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်အားတွေ၊ နောက်ပြီး ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ အလင်း၊ ဂါမာရောင်ခြည် စတာတွေကို ထုတ်လွှတ်၊ စုပ်ယူ၊ လွင့်စင် .. စတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို လေ့လာတဲ့ ဘာသာကို ကွမ်တမ်အီလက်ထရိုဒိုင်းနမစ် (QED) လို့ခေါ်ပါတယ်။
အက်တမ်တွေကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ အီလက်ထရိုမက္ကနက်တစ်အားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုလဲ တစ်နည်း နားလည်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ နယူတန်ရဲ့သီအိုရီကတဆင့် ပန်းသီးကြွေကျတာဟာ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့်လို့ ကျွန်တော်တို့ သိနားလည်ခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်နည်းနားလည်ရမှာက ပန်းသီးမကြွေကျခင်မှာ ပန်းသီးအညှာထဲမှာရှိတဲ့ အက်တမ်လေးတွေရဲ့ အီလက်ထရိုမက္ကနက်တစ် အားတေဟွာ စုစည်းအားကောင်းပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခိုင်မြဲစွာ ချည်နှောင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် ကမ္ဘာမြေကြီးဆီမှာရှိတဲ့ အက်တမ်တွေအားလုံးရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားက ပန်းသီးကို မြေပေါ်ပြုတ်မကျစေနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပန်းသီးအညှာထဲမှာ ရှိတဲ့ အက်တမ်တွေရဲ့ အီလက်ထရိုမက္ကနက်တစ်ပေါင်းစည်းအားနဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က အက်တမ်တွေအားလုံးရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားဟာ တစ်ချိန်လုံးအားပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာတော့ ပန်းသီးအညှာခြောက်သွားလို့ အညှာထဲက အက်တမ်တွေရဲ့ ပေါင်းစည်းအားလျော့သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က အက်တမ်တွေအားလုံးပေါင်းရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားက အားသာသွားပြီး ပန်းသီးကို မြေပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာစေပါတော့တယ်။
အီလက်ထရိုမက္ကနက်တစ်အားကို လျှပ်စစ်သံလိုက် အပြန်အလှန်သက်ရောက်ခြင်းလို့လဲ မှတ်သားထားရပါမယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆိုရင် ကွမ်တမ်အီလက်ထရိုဒိုင်းနမစ်၊ အီလက်ထရွန် ပေါ်စီထရွန်တွဲခြင်းနိယာမ၊ အီလက်ထရွန်စုံတွဲ မျိုးပြုတ်ခြင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း …. စတာတွေကို သိရှိနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ရစ်ချက် ဖိုင်းမန်း၏ အီလက်ထရွန်ပေါ်လူးရှင်း ဖြစ်စဉ်)
နယူးကလီးယပ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အားပျော့တဲ့ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြင်းအားက နယူးကလီးယပ် အားပြင်း ရဲ့ အဆပေါင်း ကုဋေတစ်သန်းပုံ တစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သူလဲ တာတိုအားတစ်ခုပါပဲ။ နယူးကလီယပ် အားပျော့ဆိုတာ အခြေခံအားလေးမျိုးထဲမှာ နောက်ဆုံးမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ဘီတာ အမှုန်တွေရဲ့ ယိုယွင်းမှုကို လေ့လာရင်းကနေ ဒီ အားကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကလီးယပ်အထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အားဖြစ်ပေမယ့် နယူးကလီးယပ် အားပြင်းနဲ့ ပြင်းအားခြင်း အဆပေါင်းများစွာ ကွာခြားနေတဲ့ အတွက် ဒါဟာ နောက်ထပ် အခြေခံအားတစ်ခုဖြစ်မှန်း သိရှိခဲ့ကြတာပါ။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ နယူးကလီးယပ် ယိုယွင်းမှုတွေကိုလေ့လာရင် နယူးကလီးယပ် အားပျော့အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကလီးယပ်အားပျော့ ကနေ လေ့လာသိရှိခဲ့တာ တစ်ခုကတော့ ပယ်ရတီကျိုးပေါက်ခြင်းပါဘဲ။ အရင်တုန်းက သိရှိထားခဲ့တဲ့ ပယ်ရတီတည်မြဲမှုနိယာမဆိုတာဟာ အားပျော့ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုမှာ မမှန်ကန်တော့တဲ့ အကြောင်း၊ ကိုဗော့ (C60) အက်တမ်ကို ပကတိ အပူချိန်နီးပါး အအေးခံပြီး သံလိုက်စက်ကွင်း နဲ့ စမ်းသပ်ပြီးတော့ တွေ့ရှိလာရပါတယ်။ ပယ်ရတီ တည်မြဲမှုနိယာမဆိုတာကတော့ အလွယ်ပြောရရင် "စနစ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုမှာ ရူပဗေဒနိယာမ အသစ်တွေ မဖြစ်ပေါ်စေရ" ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် အက်တမ်နဲ့ ဆန့်ကျင်အက်တမ်တွေကို လေ့လာရင် ပြုမူပုံအတူတူပဲဖြစ်တာကို တွေ့ရမယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အက်တမ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စကြ၀ဠာနဲ့ ဆန့်ကျင်အက်တမ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စကြ၀ဠာမှာ ရူပဗေဒ နိယာမတွေ အတူတူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားပျော့ နယူးကလီးယပ် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကို လေ့လာရင်းကနေ အထက်ပါ သီအိုရီ ကျိုးပေါက်နိုင်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စကြ၀ဠာအသစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့တဲ့အခါ အဲဒီစကြ၀ဠာဟာ ဆန့်ကျင် အက်တမ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စကြ၀ဠာ ဟုတ်မဟုတ်ကို စမ်းသပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို သိရှိခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဘီတာ ယိုယွင်းမှု ဖြစ်စဉ်)
ဒြပ်ဆွဲအားဆိုတာကတော့ လူသိအများဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံအားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သြကာသလောကကြီးတစ်ခုလုံး ရှိရှိသမျှ အရာဝတ္ထုတိုင်းဟာ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆွဲငင်နေကြပါတယ်။ ဒြပ်ဆွဲအားဟာ တာဝေးအားတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပြန်နိယာမ (Inverse Square Law) နဲ့ တွက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒြပ်ဆွဲအားစက်ကွင်းဟာ အနန္တ (Infinity) အထိ သက်ရောက်မှုရှိပြီး အက်တမ်လေးနှစ်လုံးကနေပြီး ကြယ်စုကြီးတွေအထိ ဒြပ်ဆွဲအားပုံသေနည်းက အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒြပ်ဆွဲအားကို ဆာအိုင်းဆက် နယူတန် (၁၆၄၂-၁၇၂၇) ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ သီအိုရီ ၊ သူထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကျမ်းစာအုပ်တွေဟာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်လို့ ယနေ့အထိ အောင်ပွဲခံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နယူတန်ရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ သီအိုရီတွေဟာ အစွမ်းထက်လွန်းပါတယ်။ အားလမ်းကြောင်းတွေကို တွက်ထုတ်ပြီးတော့ မမြင်ရသေးပေမယ့် ကျန်ရှိနေတဲ့ ဂြိုဟ်တွေ တည်ရှိကြောင်း တွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလဲ ကြယ်စုကြီးတွေဆီမှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်မှောင်၊ ရုပ်ဒြပ်မှောင်၊ စကြ၀ဠာကြီးမျှင်ကြီးတွေ … စတာတွေကို အပြင်မှာ မတွေ့ရသေးပေမယ့် ဒြပ်ဆွဲအား အီကွေးရှင်းတွေနဲ့ ရှာဖွေထားကြတာပါ။
(အက်တမ်လေးနှစ်လုံးမှ ကြယ်စုကြီးများအထိ သုံးနိုင်သော ဒြပ်ဆွဲအားပုံသေနည်း)
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အားလေးမျိုးကို ရူပဗေဒပညာရှင်တွေအားလုံးက ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အိုင်းစတိုင်းလဲ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဟိုင်ဇင်ဘတ်နဲ့ ဒီရပ်တို့လဲ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အက်ဒ်ဝပ်ရစ်တန်း လည်းကြိုးစားနေတုန်းပဲ၊ စတီဖင်ဟော့ကင်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေလဲ ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ "ဟင်.. သူတို့က အဲဒီအားတွေကို ပေါင်းစည်းပြီး ဘာလုပ်ကြဖို့လဲ?" ဟု အပြင်လူတစ်ယောက်က မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်နားလည်သလို အောက်ပါအတိုင်း အဖြေပေးဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီအားလေးမျိုးပေါင်းစည်းပေးနိုင်မယ့် ရူပဗေဒ သူရဲကောင်းပေါ်ထွက်လာမယ့် အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ စကြ၀ဠာကြီး ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အလုံးစုံကို သိနိုင်ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စကြ၀ဠာကြီး စတင်မွေးဖွားခဲ့တုန်းက အလွန်ကို သိပ်သည်းပြီး အပူအချိန်အလွန်မြင့်တဲ့ အမှတ်ထူးကလေးကနေ ဒီကနေ့ ကြယ်စုကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ လက်ရှိအချိန်အထိ လုံးဝမှန်ကန်နေတဲ့ ဘစ်ဘင်းသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြေခံရူပဗေဒအားတွေ အတိတ်ကာလတုန်းက ဘယ်လိုပေါင်းစည်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါတယ်။ အရာရာတိုင်းရဲ့ သီအိုရီတစ်ခု ရရှိလာအောင် လျှောက်လမ်းလာခဲ့တဲ့ ခရီးကြမ်းဟာ လေးပုံသုံးပုံ အထိ ခရီးရောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒြပ်ဆွဲအားက လွဲရင်ကျန်တဲ့ အားသုံးမျိုးကို စူပါကြိုးမျှင်လေးနဲ့ M-သီအိုရီတို့က ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ ဒြပ်ဆွဲအားကိုတော့ ကျန်အားသုံးမျိုးနဲ့ ယနေ့အချိန်အထိ ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အခြေခံအား လေးမျိုးစလုံးကို ပေါင်းစည်းပေးနိုင်မယ့် သီအိုရီကို GUT လို့မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ရူပဗေဒ ပညာရှင်တွေဟာ ဟာဗယ်မှန်ပြောင်းလိုမျိုး အစွမ်းထက် ကိရိယာတွေကိုသုံးပြီး အလင်းနှစ် ဘီလီယံပေါင်းများစွာက စကြ၀ဠာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရှာဖွေလေ့လာနေကြပါတယ်။ အမှုန်အရှိန်ပေးစက်ကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကြီးတွေ တည်ဆောက်ပြီးတော့လည်း အက်တမ်အောက်ကမ္ဘာကို နားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြ သလို စာရွက်ပေါ်မှာ သင်္ချာအီကွေးရှင်းတွေ တွက်ထုတ်ပြီးတော့လည်း အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ စွမ်းအင်နဲ့ ဒြပ်ထု ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို E=mc^2 ပုံသေနည်းနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သလိုပါဘဲ၊ တစ်နေ့မှာ ရူပဗေဒအား လေးမျိုးစလုံးကို ပေါင်းစပ်နိုင်မယ့် အချိန်ကြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စကြ၀ဠာကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့၊ အနာဂတ်ကို အီကွေးရှင်း တစ်ကြောင်းထဲနဲ့ ရှင်းလင်းနိုင်တော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
(အခြေခံအား သုံးမျိုးကို M-သီအိုရီက ပေါင်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ gravity နဲ့သာ တွဲစပ်ပေးနိုင်ရင် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ပါမယ်။)
တစ်နေ့တလံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပါဘဲ။ ကမ္ဘာဦးအစကတည်းက လူသားတွေဟာ သူတို့ ပဟေဠိဖြစ်နေခဲ့တဲ့ စကြ၀ဠာဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို တောက်လျှောက် လေ့လာကြည့်ခဲ့ကြရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးရာ ၀န်းကျင်ကနေပြီး ဒီကနေ့ထိ များစွာပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်နားကို နီးကပ်နေပြီလို့လည်း ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ အန္တိမပန်းတိုင်ကို သွားရောက်တဲ့ နေရာမှာ ရူပဗေဒအခြေခံ "အား" တွေက အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ရှုနေသူ မိတ်ဆွေဟာ ရူပဗေဒနယ်ပယ်က မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အပေါ်က ပြောဆိုခဲ့တာတွေ အားလုံးကို မေ့ပြစ်လိုက်ပါ။ "ရူပဗေဒမှာ အခြေခံအားလေးမျိုး ရှိတယ်" ဆိုတာလေးတစ်ချက်ကို မှတ်မိရင်ဘဲ ကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Yaw Na Than (28.6.2011)
PDF @ http://www.mediafire.com/?o40nckd56cygb24